Ujeedada Hawl-gal Ciidanka Dab-Demisku Ka Fuliyeen Qasriga Madaxtooyada Somaliland | Berberatoday.com
Ujeedada Hawl-gal Ciidanka Dab-Demisku Ka Fuliyeen Qasriga Madaxtooyada Somaliland
Hargeysa(Berberatoday.com)-Ciidanka Dab-demiska JSL ayaa shalay hawlgal hal maalin ah ku fuliyey xarunta Madaxtooyada Somaliland oo ah xarunta xafiiska dalka looga arrimiyo ee uu ku shaqeeyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Sidaana waxa lagu cadeeyey war qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Warbaahinta iyo Xidhiidhka Dadweynaha ee Ciidanka Dab-demiska Qaranka Jamhuuriyada Somaliland oo nuqul ka mid ahi uu soo gaadhay Wargeyska Himilo, waxaanu u dhignaa sidan:-
Taliyaha Ciidanka Dab-demiska JSL Sareeye Guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxilli iyo masuuliyiinta waaxda farsamada, Tababbarada iyo Wacyigelinta Bulshada ayaa shalay kormeer shaqo ku tagay xarunta madaxtooyada Somaliland.
Kormeerkan shaqo ayaa ujeedadiisu daaraneyd qiimeyn rasmi ah oo ku saabsan nidaamka dab-demiska ama dab-demiyeyaasha ee xafiisyada madaxtooyada sidii loogu sameyn lahaa dayactir, sidoo kalena loo gelin lahaa dhammaan dhismayaasha kala duwan ee ay ka kooban tahay qaybaha madaxtooyadu.
Qiimeyntan oo qaadatay hal maalin ayaa waxa halkaa masuuliyiintu ku soo mareen dhammaan xafiisyada iyo dhismayaasha kala duwan ee madaxtooyada taasoo dhammaan xafiisyada kormeer ugu soo sameeyeen masuuliyiinta ciidanka dab-demiska Somaliland.
Hawshan Qiimeynta ah oo qaadatay hal maalin ayaa noqon doonta qorshe Qaran oo ballaadhan, taasi oo qiimeyn dhanka nidaamka dab-demiska ah lagu sameyn doono xafiisyada iyo hay’adda dawladda iyo dhammaan goobaha ganacsi iyo shirkadaha gaar ka loo leeyahay.
Qorshahan Qaran ayaa marka qiimeynta la dhameystiro la daah-furi doonaa, waxaanu ka hirgeli doona dhammaan Goobaha Muhiimka ee Dawladda iyo Hay’adda gaarka loo leeyahay.
Dhinaca kale, waxa iyadana wacyigelin ballaadhan loo samayn doonaa shacbi weynaha kala duwan ee ku dhaqan dalka, waxaana si gaar ah muhiimada loo saari doono goobaha bulshadu iskugu timaado, Jaamacadaha dalka iyo guud ahaan goobaha kale ee muhiimka ah.